पल शाहको स्टारडम धरापमा ? « Mazzako Online
पल शाहको स्टारडम धरापमा ?
नायक पल शाह लामो सङ्घर्ष र मिहिनेत गरेर स्टारडम बनाएका नायक हुन्। लामो समय म्युजिक भिडियोमा काम गरेको अनुभव लिएर उनी विकासराज आचार्यको चलचित्र नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरे। सुरूवात बाट नै राम्रो फ्यान फलोअर्स पाएका उनको प्राय फिल्म सफल नै छन् तर उनको निकै अपेक्षित चलचित्र विरविक्रम २ न पलका लागि सोचेजस्तो रह्यो न त दर्शकका लागि नै।
नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश सगै उनका फ्यानले सुपरस्टारको ट्याग दिए। उनले चलचित्र क्षेत्रमा लागे पनि म्युजिक भिडियोमा काम गर्न छाडेनन् यसले अझ उनको चर्चा चुल्यायो। नाई नभन्नु ल ४ पछि पूजा शर्मा सङ्ग उनले म यस्तो गीत गाउँछु मा काम गरे जुन चलचित्र व्यवसायिक हिसाबले सफल रह्यो।
फेरि उनले नाई नभन्नु ल कै स्टार आँचल शर्मा सङ्ग पेयरिङ्ग गरेर जोनी जेन्टलमेनमा काम गरे जुन चलचित्र फ्लप नै भयो तर पल र आँचलको गज्जबको केमिस्ट्री दर्शकले मन पराए र यसले पल र आचँल दुवैलाई फाईदा पनि भयो।पल फेरि मह सन्चारको चलचित्र शत्रुगतेमा आचँल सङ्गनै देखिए। पलको करियरको अर्को सफल चलचित्र बन्यो शत्रुगते। नाई नभन्नु ल २ बाट जोनी जेन्टलमेन हुदै शत्रुगते सम्म आईपुग्दा आँचल र पल ले आँप जोडिको संज्ञा पाए र पलको स्टारडम चर्को हुदै आयो।
शत्रुगते पछि उनले १४ महिनाको ग्याप लिएर चलचित्र विरविक्रम २ मा देखिए। फिल्म रिलिज अगाडि पल निकै नै एक्साइटेड थिए तर रिलिज पश्चात् उनी फिल्ममै पनि कहा हराए हराए र यो सङ्गै पलको स्टारडममा पनि प्रश्न चिन्ह आयो। सिङ्गल थिएटरमा दर्शकको केहि साथ पाएको विरविक्रम २ लाई मल्टिप्लेक्समा दर्शक पाउन धौ धौ पर्यो। सुरुवातीमा पलको स्टारडम देखेर केहि उत्साहित देखिएका निर्देशक मिलन चाम्सको उत्साह उनले देखाउन नचाहे पनि पक्कै खिन्न भएको छ।
पलको लुक्स र स्टारडमले विरविक्रम २ चल्न लाई मद्दत गरेन। फिल्म हेरेर निस्केका दर्शकले पनि पलको भन्दा उनका सहकर्मी नाजिर हुसेनको नै प्रंशम्सा गरे। यहि बाट पनि अब पलको या त अरू कसैको स्टारडमले चलचित्र नचलाउने पक्कै देखियो।
विरविक्रम २ को प्रदर्शन पछि पल शाहको फिल्मी स्टारडममा उठेको प्रश्नको उत्तर त उनको अब यसपछि रिलिज हुने चलचित्रले नै दिन्छ। उनको आगामी चलचित्र हृदयभरी र यसपछिका चलचित्र उनको काम र क्रेजले सफल भएमा मात्रै पल शाहको स्टारडममा विश्वास गर्न सकिएला।